Forum serasera malagasy Vavaka dia ampy sa izay fisainana izay indrindra no mampidi-doza - Dinika forum.serasera.org
Vavaka dia ampy sa izay fisainana izay indrindra no mampidi-doza
Fitohizan'ny hafatra : Vavaka dia ampy sa izay fisainana izay indrindra no mampidi-doza
rhaj0 - 21/06/2018 14:49
Ambara-podin"io masoandro io izany, dia zaza gasy 100 sy renin-jaza 10 indray no maty.
Every day, 100 Malagasy children die- primarily from common and preventable illnesses. And, every day 10 Malagasy women die from complications related to pregnancy and childbirth.
Ka inona no atao. Eto @ finoana/fivavahana moa ny resaka, ka mba tsy ho hors-suzé, dia ...
Dia tena tsisy vokany, tsisy valiny, sa kosa, tena tsisy dikany izany izao vavaka (lavareny) ataon'ny Kristiana gasy ao izao?
RAha ny fotoana sy angovo ary hery(ntsaina) lany @ izany "vavaka (lavareny)" izany ve no ampiasaina @ tokony ho izy, tsy mety mba "avotra" ihany ve ny zaza gasy 100 sy renin-jaza 10, ambara-podin'io masoandro io??
rhaj0 - 21/06/2018 16:52
Ampiako kely... hoe : raha mahare ny fipetraky ny zava-misy ianao, hoe
Ambara-podin'io masoandro io izany, dia zaza gasy 100 sy renin-jaza 10 indray no maty
na koa hoe, zaza gasy 1 no maty isaka ny 15 minitra, ary renin-jaza 1 isaka ny 150 minitra (fotoana nijerena baolina 6-0)
Dia raha ny valin-ketsikao, na ny an'ny olombe ao, dia hoe: "aoka isika hivavaka".
Dia tena "mino" ve ianao, fa hanavotra ireo "zaza gasy 100 sy renin-jaza 10" rahampitso ity "vavaka" natao?
Ka ny tiako lazaina, dia ilay fisainana, na hoe reflexe, manao (lava) hoe, "aoka isika hivavaka", tsy izay ve no (isan'ny) "mampidi-doza"??
Fantaro ary tsarovy tsara azany fa:
rehefa vita ilay 15 minitra nivavahanao sy nihobianao mafy tao io, dia misy zaza gasy 1 indray izany any ho any no maty.
RBNIR - 22/06/2018 13:58
Ahoana indray ity mitarogna samirery tsy misy mpanohina intsony ity rhajo a!
rhaj0 - 22/06/2018 14:20
ianao RBNIR anie no hotry ny insécure izany, ka raha vao tsy mahazo approbation oye oye ilay imazination-nao bevata, dia hotry ny voatery mamely vazim-boana ve, sa vao mainka mikimpy-mafy-toa-constipé
Efa hoe, Atsipinay 'lay kaozy, (tsy) mihaino ianao dia tsara
RBNIR - 22/06/2018 14:26
fa sao dia efa manomboka tsy misy mpanohina intsony kosa?
rhaj0 - 22/06/2018 14:45
Tsy maninona (amiko) io ho'a ry RBNIR na misy na tsisy aaa..
Fa rehefa "manohina" eto ihany azany ianao ry RBNIR, manao ahoana ny finoanao ao? Ahoana indray ny "vavaka" aninaraina teo? Inona indray no "nibebahanao" tao? Dia mbola hanao raha ao ihany ianao androany, dia hibebaka indray alohan'ny hatory?
Tsy hitanao mitsy tsy metimety ve izany routine-nao ao izany ry RBNIR?
rhaj0 - 22/06/2018 17:52
Na tsy "manohina" azany ianao re ry RBNIR, fantatra ihany fa mihinohaino eto eee..
Ka mitady irika hamelezana (ahy) ve izany i RBNIR ao io vao manohina, sa ...
Fa eritrereto tsara tokoany anie ny "routine-nao" ao ry RBNIR. Isan'andro izany ianao "mibebaka". izay ilay izy oo??
Dia ahoana k'le.. Diniho kely anie e... mandritra ny taona izany ianao, dia :
- nibebaka in-365. Dia inona mihintsy re ny heloka na ota ananki-365 ibebahanao lava ao ee..
- sa misy miverimberina ilay izy? Dia ahoana kosany azany ianao tsy "mianatra-avy-@-hadisoanao", fa dia miverina manao ity heloka/ota ao foana.. Maninona no "miverina-@-naloany-toa-amboa" lava ao re ry RBNIR...
- dia raha atao hoe, raha 1 minitra isaka ny bebaka no ataonao, ary bebaka 3 isan'andro (alohan'ny hisakafo), ary miampy bebaka 2 koa rehefa faran'ny herinandro (alohan'ny hisotrosotroana). Izany hoe, eo @ bebaka 20 isan-kerinandro, izany hoe efa ho 1000 minitra isan-taona izany no laninao re ry RBNIR, mikimpy-mafy-toa-constipé ao dia migonongonona ao.
Bebe ihany anie izany ora verinao @ tsinontsinona izany ry RBNIr ee.. manginy fotsiny ny ora laninao manompo an'i HRNRN ao, mety hoe, tapak'andro asabotsy, ary tontolo andro ny alahady..
Tsy hitanao fa misy tsy metimety ve ho'a izany routine-nao ao izany ry RBNIR?
RBNIR - 27/06/2018 07:21
Tsiambaratelo kosa ny vavaka rhajo a! Jesosy efa nampianatra hoe ataovy amin'ny mangingina iny
RBNIR - 27/06/2018 09:21
Rehefa mivavaka aloha dia Jesosy mihitsy no nampianatra hoe ....« Ary mamelà ny helokay* tahaka ny namelanay izay meloka** taminay. [*Na: trosa] [**Na:nitrosa] » (Matio 6:12)
Nohamafisina taty aoriana fa mila mifona hatrany, « Aza manahy na inona na inona; fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin'ny fisaorana no ho entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. » (Filipiana 4:6)
Tsy maintsy hatao izany mba "TSY HANAMARINN-TENA" eo anatrehan'Andriamanitra....
Indraindray koa mety misy fiteny, fihetsika, fijery tsy tsapanao akory fa mety mitondra ota aoa anatinao ao.....Ilaina ny mifona mandrakariva e!
RBNIR - 27/06/2018 11:39
Rhajo, ny ota tsy nahy no tena hifonana satria tsy azo atao kosa ny manao fanahy iniana manota...
rhaj0 - 27/06/2018 14:02
rhaj0 Ahoana indray ny "vavaka" aninaraina teo? Inona indray no "nibebahanao" tao?
RBNIR Tsiambaratelo kosa ny vavaka rhajo a! Jesosy efa nampianatra hoe ataovy amin'ny mangingina iny
Ilay "atao @ mangingina" midika hoe, mandehana mi-se concentrer, fa tsy hoe, afeno ny (vavaka) ataonao (fa mahamenatra)
Sa ny an'ny RBNIR, mila afenina ny (vavaka) ataony ao (fa mahamenatra)??
Satria ao izao i RBNIR, mambosibosika an'Andmntra mba "hampirehitra ny hatezeraNY" @ hafa rehetra izay tsy miaraka @ RBNIR/Hrnrn ao an...
endriny - 27/06/2018 14:12
Tsiambaratelo indray hono ny vavaka. Kanefa ry zareo eo am-pivoriana ao ampiangonana no Mivavaka is an-kerinandro.
Zava-poana ny vavaka tsy arahin’asa hoy ilay tsianjery
RBNIR - 27/06/2018 15:11
Misy ny vavaka iombonana, misy ny atao amin'ny mangingina,
RBNIR - 27/06/2018 15:22
Fampianaran'i rhajo io fa ny nampianarin'i Jesosy dia hoe : « Fa ianao kosa, raha mivavaka, dia midìra ao amin'ny efi-tranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin'ny Rainao, Izay ao amin'ny mangingina; ary ny Rainao, Izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. » (Matio 6:6)
Ekena fa misy ny vavaka iombonana, iarahana manao araka izay fanentanana ataon'ny mpanentana fivavahana ery anoloana, fa hafa mihitsy ilay atao amin'ny mangingina (ianao sy Izy irery ihany kosa amin'izay fotoana izay)
rhaj0 - 27/06/2018 15:35
Efa noresahina tato io ry RBNIR aa..
ka ahoana azany ianao ao ry RBNIR, mba manaraka tsara ny "fampianaran-Jesosy", sa henoinao @ sofina havia, dia tsy rahirahianao akoriny ny ohatra ameNY...
Matio 26:39 Ary nony nandroso kely izy, dia nihohoka tamin'ny tany ka nivavaka...
Io izany ilay "mitsongolo-body" tahaka ny Moslimo an...
Tena ao izany ianao ry RBNIR??
Lioka 22:44 Dia voan'ny fiadiana aina izy, fa vao mainka nivavaka mafimafy kokoa. Ary nanjary toy ny rà ny hatsembohany sady nipotrapotraka tamin'ny tany.
Tena mipiriritra koa ny hatsembohanao RBNIR, toy ny rà izay tsirin'ny aina an...
Tena ao tsara mihintsy izany ianao ry RBNIR??
endriny - 28/06/2018 14:19
Rehefa inona izany no manao ireo vavaka 2 ireo
Vavaka iombonana no atao rehefa haka 1/10 sy haka ny tsinisasarana
Vavaka mangingina no atao rehefa mangataka famelana sy mba tsy hisy hitory tamin'ny fanolanana.
Vavaka iombonana rehefa hanongam-panjakana na mitady fitoniana
Vavaka mangingina no atao rehefa mitalaho mba tsy ho hitan'ny olona ny kolikoly sy ny halatra isan-karazany
Vavaka iombonana mba isehoana amin'ny mpiara-belona fa mpivavaka ihany koa ny tena
Vavaka manokana mitalaho mba afahan'Atra ny haratsiana natao: manao sipa ivelan'ny tokatrano, manolana mpianatra na mpiasa-trano...
rhaj0 - 01/07/2018 18:08
Vavaka TENA IZY satria mitondra valim-bavaka
Vavaky ny Mpitondra fivavahana
- Vavaka iombonana no atao rehefa haka 1/10 sy haka ny tsinisasarana
- Vavaka mangingina no atao rehefa mangataka famelana sy mba tsy hisy hitory tamin'ny fanolanana.
Vavaky ny Mpanao politika
- Vavaka iombonana rehefa hanongam-panjakana na mitady fitoniana
- Vavaka mangingina no atao rehefa mitalaho mba tsy ho hitan'ny olona ny kolikoly sy ny halatra isan-karazany
Vavaky ny Olo-tsotra
- Vavaka iombonana mba isehoana amin'ny mpiara-belona fa mpivavaka ihany koa ny tena
- Vavaka manokana mitalaho mba afahan'Atra ny haratsiana natao: manao sipa ivelan'ny tokatrano, manolana mpianatra na mpiasa-trano...
Dia tena nataoko tanaty cadre mihintsy ity resak'i Endriny ity, fa tena marina loatra. Misaotra Endriny!!
endriny - 03/07/2018 18:49
rhaj0 - 05/07/2018 17:06
Izao izao raikitra ny coupe du monde. Dia samy "mivavaka" eo daholo rizalahy. Ao ny manao lakroa ho an'i Jesosy, ao ny manoka-tanana ho an'i Mahomet, ao akoriny aza ny manondro lanitra...
Ka dia inona marina tokoany moa no "angatahina" ao izao?
Na hoe "mitondra inona" tokoany moa ny fanaovana izany?
rhaj0 - 05/07/2018 22:25
Nijerijery ny lazain'Ineny gogola, dia toa hoe
1- misy ny "mangataka" @ izao "ao ambony ao" izao, ny mba handreseny hono. Io aloha dia hihomehezana fotsiny. Fa asa raha misy koa "mangataka" mba ho resy na ho voa ny ankilany, fa dia mbola hihomehezana fotsiny ihany izany ee... satria dia tena TSY mahakitika ny zava-hisy eo izany "hataka" izany, fa ao @ imazination-n'ny mpangatka ao fotsiny ihany.
Fa avy eo, rehefa resy ilay "nangataka" teo, dia tena mba mora mionona haingana kosany, satria izay hono no sitrapon'ilay "ao ambony ao" izao. RAha "mandresy" indray moa izy, dia miedinedina fa tena tian'ilay "ao ambony ao" izao hono izany ee..
2- misy indray, hotry ny hoe "miresaka @ namana imazinera" hono izy ao, ary misy akoriny moa mihevitra fa mahazo (mahare) fankaherezana direkta hono. Ny vokany dia milamin-tsaina koakoa zareo; mihena ilay anxiété. fa ilay "mpangataka" itsy ambony koa, rahefa convaincu fa "mihaino" (sy niresaka) azy hono ilay "ao ambony ao" izao, dia milamin-tsaina ao koa.
Raha jerena izany, dia toa "effet placebo" ihany ilay vavaka ee.. rehefa "mino" ianao fa mahatsara anao ny zavatra iray, na dia TSy nahakitika anao azany izany satria zavatra TSY nisy akoriny raha ny tena izy, dia (mety) hahatsara anao tokoany ihany..